Moments leh saaxiibo 17
Muxuu mararka qaarkood sheegay in Ciise uu ahaa mid ka mid ah badbaadiyeyaasha aadanaha iyo in dadkoodii hore ay haysteen badbaadiyeyaal, halkii ay ku dhihi lahaayeen wuxuu ahaa Badbaadiyaha adduunka, sida uu hayo dhammaan Masiixiyadda?
Bayaanku wuxuu sababayaa dhowr arrimood. Qaarkood waxay sameeyaan qoraalka sababta oo ah waxay maqleen inay dadka kale sameeyeen; qaar ka mid ah, kuwaas oo la yaqaan taariikhda waagii hore, sababtoo ah taariikhda dadka qadiimiga ah waxay diiwaangeliyaan xaqiiqda ah inay haysteen badbaadiyeyaal badan. Badbaadinta dadyowga kala duwan ayaa ku kala duwan sida baahida dadka ay u yimaadaan, iyo waxa qaaska ah ee ay tahay in la badbaadiyo. Sidaa daraadeed hal badbaadiye ayaa u muuqday inuu dadka ka dhaadhiciyo jirro, ama abaar, ama ka soo horjeeda cadawga ama bahal duurjoog ah. Badbaadiye kale ayaa u muuqday in uu xor u yahay dadka uu ka soo jeedo dhirta si uu u baro luuqadaha, farshaxanka iyo cilmiga sayniska ee loo baahan yahay in loola dhaqmo, ama loo muujiyo maskaxdooda iyo fahankooda. Qof kasta oo ka mid ah nidaamyada diimeed ee dunida ayaa si cad u arki doona in badbaadiyeyaashu ay muuqdeen qarniyo ama kumanaan sanadood ka hor taariikhda markii Ciise la sheegay inuu ku dhashay.
Haddii Ciise la sheegay inuu yahay badbaadiyaha dunida oo dhan, Masiixiyadda oo dhan, caddayntaasi waxay noqon doontaa caddaynta jaahilnimada iyo qirashada Masiixiyadda oo dhan, laakiin nasiib wanaag Masiixiyadda maahan sidaas. Sanadihii la soo dhaafay gaar ahaan, dunida galbeedku waxay noqotey oo noqotey mid si fiican loo yaqaan taariikhda iyo Qorniinka dadka kale, iyo dareen kale oo saaxiibtinimo leh iyo is weheshi wanaagsan ayaa lagu muujiyay kuwa jinsiyadaha kale iyo caqiidooyinkooda. Dunida reer galbeedku waxay barteen inay qiimeeyaan dukaamada xigmadda ee ku jira kaydka suugaanta ee dadyowga qadiimiga ah. Ruuxa hore ee dad yar oo ay doorteen Ilaah ama laftiisa loo doortay in la badbaadiyo tirooyinka tira badan ee la soo dhaafay ayaa la waayay, meelna waxay ku imaanaysaa aqoonsi caddaalad iyo xuquuqda dadka oo dhan.
Ma noo sheegi kartaa haddii ay jiraan dad u dabaaldega dhalashadooda badbaadadooda markay tahay ama ku dhawaad ​​shan iyo labaatankii shanaad ee Diseembar (wakhtiga qorraxda la sheegay inuu galo calaamadda Cunniga?
Maalintii labaatanaad ee bisha Diisambar waxay ahayd waqti farxad leh oo ka dhacday Masar, waxaana lagu qabtay xaflad lagu maamuusayay dhalashada Horus. Munaasabadaha iyo xafladaha lagu xusay buugaagta xurmada ee Shiinaha, xafladaha diimaha kale ee hore ayaa si dhaw ula socda. Toddobaadkii ugu dambeeyey ee December, xilliga qaboobaha jiilaalka, dukaamada iyo maxkamadaha ayaa la xiray. Dabaaldegyada Diinta ayaa markaa loo dabaaldegaa, waxaana loo yaqaan 'Festivals of Gratitude to Tie Tien. Faarax Mitras waxaa loogu yeeraa dhexdhexaadiye ama badbaadiye. Waxay u dabaaldegeen maalintii uu dhashay shan iyo labaatankii bishii Diseembar iyada oo farxad weyn leh. Waxaa la ogsoon yahay in wakhtigaas qorraxdu sii socoto, dabadeedna wuxuu bilaabmayaa inuu ku noqdo woqooyi ka dib markii uu ku noolaa koonfurta, waxaana la sheegay in afartan maalmood loo kala tagay mahadnaq iyo allabaryo. Roomaanku wuxuu u dabaaldegay shan iyo labaatanaad bishii Diseembar iyada oo xaflad weyn ay ku maamusho Bacchus, sidii wakhtigu ahaa wakhtigaas oo qorraxdu bilaabatay inuu soo laabto jiilaalka qaboobaha. Waqtiga dambe, markii xaflado badan oo Faaris ah lagu soo bandhigay Rome, isla maalintaa waxaa lagu dhisay xaflad lagu maamuusayo Mithras, oo ah qorraxda. Hindusku waxay leeyihiin lix xafladood oo isku xigta. Shimbirkeedii shanaad ee bisha Diseembar dadku waxay qurxiyaan guryahooda googo iyo waraaqo caleemo ah oo guud ahaanna u keenaan hadiyado asxaabta iyo qaraabada. Sidaas awgeed waxaa la arki doonaa in taariikhda taariikhda dadyowga hore ee asalka ah iyo sidoo kale caabudi jireen sida riyaaqay. Taasi waxay ahayd wakhtigii qaboobaha jiilaalka ma noqon karo shilal mug leh ama shilal. Waa wax aad u macquul ah in la maleynayo, in dhammaan shakiqyada muuqda ee hore, waxaa jira xaqiiqada dhabta ah ee muhiimadda qotada dheeriga ah.
Waxaa la sheegay qaar ka mid ah in dhalashada Masiixa ay tahay dhalasho ruuxi ah. Haddii tani ay sidaas tahay, maxay tahay sababta in loo dabaaldagayo jimicsiga jidhka jidhka marka la cuno iyo cabitaanka, hab wax ku ool ah, taas oo ka soo horjeeda fikradaha diiniga ah?
Sababta arrintan loo soo celiyay ee Kiristaanka ee qarniyadii hore. Dadaalkooda ay ku doonayaan inay ku dhameeyaan caqiidooyinkooda iyagoo aaminsan mujaahidiinta iyo qurba-joogta, waxay ku darsadeen xafladaha iyaga oo ku jira taariikhdooda. Tani waxay ujeeddadeeda u jawaabtay: waxay ka dheregtay caadooyinka dadkaas waxayna u horseeday in ay u malaynayaan in wakhtigu ay tahay mid muqadas ah oo lagu kalsoonaan karo iimaanka cusub. Laakiin, marka la aqbalo iidooyinka iyo dabbaaldegyada, ruuxa kaas oo sababay kuwan waa lumay oo kaliya calaamadaha ugu caansan ee laga ilaaliyo ragga ka tirsan waqooyiga, Druids iyo Roomana. Xayawaannada jilicsan ayaa la indho-garey lana siiyay rukhsad buuxda; gaajo iyo sakhraan ayaa ka adkaadaa wakhtigaas. Sababtoo ah dadka ugu horreeya, sababtoo ah farxadooda waxay ahayd sababtoo ah aqoonsigooda Sun-ka ee soo martay barta ugu hooseysa ee koorsadiisa muuqata iyo shan iyo labaatankii shanaad ee bisha Diseembar ayaa bilaabay safarkiisa, taasoo keenaysa soo noqoshada guga oo ay u badbaadin lahayd laga bilaabo qabow iyo baabi'inta jiilaalka. Ku dhowaad dhammaan kulannadeena xilliga Christmas-ka waxay asal ahaan ka soo jeedaan kuwii hore.
In 'Moments with Friends' 'ee Vol. 4, bogga 189, waxaa la yiraahdaa Christmas-ka micnaheedu waa 'dhalashada qorraxda aan la arki karin', ee ah mabda'a Masiixiga, 'taas oo sii socota,' waa inay ku dhalataa gudaha '. Haddii tani sidaas tahay, miyuu raacayaa in dhalashada jirka ee Ciise uu sidoo kale ahaa shan iyo labaatankii shanaad ee Diseembar?
Maya, sidaas maahan. Dhab ahaantii waxaa lagu sheegay "Moments with Friends" kor ku xusan in Ciise uusan ahayn jirka jirka. Taasi waa jidh ka duwan tan jirka ah-inkastoo ay ku dhalatay iyada oo loo marayo jidhka. Habka dhalashadani waa mid soo ifbaxay, waana kala duwanaansho u dhexeeya Ciise iyo Masiixa. Ciise waa jidh kaas oo caymis la'aanta. Dhab ahaantii, dhimashadu lama midoobin qofkasta ilaa Ciise ama jidhka aan dhimanayn. Waa jirkan dhimashada ah, Ciise, ama magaca weligeed ah loo yaqaanay kuwii hore, kuwaas oo ah badbaadiyaha nin iyo ma ilaa iyo inta uu dhalashada ahaa ee uu ka badbaadiyey dhimasho. Xeerka isku midka ah ayaa maanta qabta munaasabadaas. Kii dhiman lahaa waa inuusan dhiman, yaanu dhiman. Laakiin mid ka mid ah kuwa dhintay ma dhiman karo, haddii uusan dhiman karin. Sidaa darteed waa in qofku dhimashada dhimashada ka hor dhimanayaa, ama haddii kale uu sii socdo oo uu sii wato mar kale, ilaa uu ka badbaado dhimashada by jirkiisa aan dhiman Ciise. Laakiin Masiixu maahan jidh, sida Ciise. Aniga iyo annaga aawadeenna, Masiixu waa mabda 'aanna ahayn qof ama jidh. Sidaa darteed waxaa la sheegay in Masiixu waa in uu ku dhashay gudaha. Tani macnaheedu waxa weeye, kuwa aan dhimanayn, in maskaxdoodu ay ku iftiiminayaan joogitaanka mabda'a Masiixa waxayna awoodaan inay fahmaan runta waxyaalaha.
Haddii Ciise ama Masiixu uusan ku noolayn oo wax barin sida uu u malaynayo inuu sameeyay, sidee baa qaladka noocaan oo kale ah looga adkaan karaa qarniyo badan oo ay tahay inuu ku guuleysto?
Xadgudubyada iyo Jaahilnimada way ka adkaanayaan illaa ay ka beddelaan aqoonta; oo leh aqoon, jaahil ah ayaa baxa. Looma helin labada qol. Maqnaanshaha aqoonta, ha ahaado aqoon ama aqoon ruuxi ah, waa in aan aqbalnaa xaqiiqooyinka ay yihiin. Dumarka xaqiiqada ah ee kala duwan ayaan u badaleynin. Ma jiraan xaqiiqooyin taariikhda ku saabsan dhalashada Ciise ama Masiixa. Ereyada Ciise iyo Masiixa jirey qarniyo badan ka hor dhalashadii la baddalay. Ma lihin wax taariikh ah oo la xidhiidha wakhtigii uu ku dhashey. Taas oo ah kii ku noolaa - iyo ciddii keentay carqalado iyo aqoonsi asalkiisa muhiimka ah-waa in la iska indho tiray taariikhyahanadii taariikhda ee xilligaa aan macquul ahayn. Herod, boqorka, ayaa la sheegay in ay dhalisay ilmo badan oo lagu dilo si loo hubiyo in "ilmaha yar" uusan aheyn in uu noolaado. Bilaatos waxaa lagu sheegay in Ciise lagu xukumay, iyo Ciise ayaa la sheegay in uu sara kacay ka dib markii uu iskutallaab ku qodbay. Waxyaabahaani midkoodna lama diiwaangelin taariikhyahan taariikhyahan ah. Diiwaanka keliya ee aan haysanno waa tan ku jirta Injiillada. Marka aan eegno xaqiiqooyinkani ma sheegi karno dhalashada la sharfo in ay noqoto mid run ah. Waxa ugu fiican ee la samayn karo waa in la siiyo meel ka mid ah khuraafaadka iyo halyeeyada dunida. Inaan sii wadno khaladkayaga ku saabsan dhalashada iyo dhimashada Ciise maaha mid la yaab leh. Waa arrin caadi ah oo nasiib u leh annaga. Ciladda, haddii ay jirto qalad, waxay la jiitaa kuwa hore ee aabayaasha kaniisadda kuwaas oo sameeyey codsiga iyo aasaasay dogma ee dhalashada iyo dhimashada Ciise.
Ma waxaad leedahay macnaheedu in taariikhda Masiixiyaddu ay tahay wax aan sax ahayn, in nolosha Masiixa ay tahay khuraafaad, iyo in muddo ku dhow 2,000 dunidu ay aaminsan yihiin khuraafaad?
Dunidu ma rumaysnayn diinta kiristaanka ilaa ku dhowaad 2,000. Dunidu ma rumaysnayso maadada kiristaanka maanta. Masiixiyiintu iyaga ma rumaysan yihiin ku filan waxbarista Ciise inuu ku noolaado boqolkiiba boqol iyaga ka mid ah. Masiixiyiin, iyo sidoo kale adduunka intiisa kale, waxay ka soo horjeedaan waxbarista Ciise ee noloshooda iyo shaqadooda. Ma jiro waxbarid keliya oo Ciise ah oo si buuxda loo ilaaliyo Masiixiyiinta. Sida farqiga u dhexeeya xaqiiqda iyo masawirka, waxaannu soo sheegnay inaysan jirin wax xaqiiq ah oo ku saabsan dhalashada iyo nolosha Ciise. Fikradda iyo khuraafaadka waxaa qabta Masiixiyiin badan si ay u noqdaan diin diin ah, laakiin rumaysadka Masiixiyaddu waa isku mid. Xaqiiqda dhabta ah, diinta masiixiga waxa ay ku saleysan tahay xaqiiqda oo ka badan inta badan diimaha waaweyn ee adduunka. Tani macnaheedu maaha in Masiixiyaddu ay been tahay, iyo in diimaha oo dhan ay been yihiin. Waxaa jira sheeko gabow ah oo ku dhexyaala mythos kasta waxaa ku yaalla aalado. Khayaali waa sheeko ku jirta xaqiiqo qoto dheer. Tani waa runta diinta masiixiga. Xaqiiqda ah in dad badani ka faa'iideysteen taariikhda hore iyo waqtiyadayada oo ay aaminsan yihiin nolosha iyo badbaadinta awoodda Ciise waa inuu leeyahay awood qarsoodi ah; halkan hoos ku xusan xoogiisa. Aragtida macallin kasta oo weyn ama waxbaridu waxay ku xiran tahay sharci gaar ah, sharciga wareega, ama xilliyada. Waqtiga dhalashada ee lagu sharraxay Ciise wuxuu ahaa wareeggii ama xilligii loogu talo galay iyo horumarinta runta cusub. Waxaan aaminsannahay in wakhtigaas dadku ahaa mid ka mid ah kuwii geeriyooday, dhalashadii jidhka Ciise ee hore loo soo gudbiyey, in uu sidan u helay, wuxuu siiyay barashada dhimashada kuwa uu u arko inuu awoodo inuu helo oo fahmo oo waxay ku soo ururteen amar ay ku xidhnaayeen isagii iyo xertiisii ​​iyo dad badanba. Taasi maahan taariikhda arrintani waa iyada oo aan la ogayn dadka aan garanaynin qarsoodiga ku saabsan nolosha aan nolosha lahayn. Markuu xertii tagay ayuu baroortay; wuuna tegey, oo xertiisii ​​ayaa fasaxday. Sababta loo adkaynayo rumaysadka Masiixa iyo waxbaristiisa ayaa ah in uu jiro nin xukun ku salaysan oo suurtogal ah in uu dhimanayo. Caqiidadan qarsoodiga ahi waxay muujinaysaa ficilada waxbarista ee kaniisaddu ku dhacday qaabkoodii hore.